मालिश सीट प्याड - iSearch
सुरु औषधि पसल स्वास्थ्य मालिश सीट आवरण
ट्यापिंग मालिश सबैभन्दा गहन मालिश प्रविधि हो।
यसले रक्त परिसंचरणलाई उत्प्रेरित गर्छ र मांसपेशीको तनावलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यस्तै गरी, गहिरो ऊतकमा कोशिकालाई उत्तेजित गराउन र शरीरलाई ताप्नको लागि एकपल्ट लोडिङ क्षतिपूर्ति गर्न प्रभावकारी छ।
को ट्याप मालिश पनि मांसपेशी निर्माण गर्न मद्दत र पनि bronchi गर्न सकारात्मक प्रभाव र expectorant छ।
- मापन को एक्सचेंज
- क्रान्तिको लज्जा
- गतिशीलता को कारण पीडा
थकानको कारणले पीडा
यसमा लागू हुँदैन:
अचम्म र रोल मालिश
दुइवटा हातहरू जस्तै, मालिश बटनहरू स्पिनसँगै स्लाइड गर्नुहोस्।
यो उपचारको समयमा फैलिएको र फैलिएको छ।
यसो गर्दा, इन्टरभेरेरबेल डिस्कलाई राहत दिइन्छ।
मालिश एक मालिश को औंलाहरु संग केहि गरिन्छ, केहि अंक उत्तेजित गर्दछ,
मांसपेशिहरु र ऊतकों ढीला र आराम हो, जो रक्त परिसंचरण लाई बढावा दि्छ। टाउको दुखाइ र माइग्र्रेनको रोकथाम।
एक्यूप्रेचर मुख्य वा पूरक चिकित्सा को रूप मा पारंपरिक चीनी चिकित्सा (टीएमसी) मा पाइन्छ।
मालिश उपचार SHIATSU महत्वपूर्ण ऊर्जा मेरिडियन्स पछि स्पिन पासको बायाँ र दायाँ। ब्याक मांसपेशिहरु को तनाव ऊर्जा को प्रवाह को रोकथाम र स्वास्थ्य समस्या पैदा गर्न सक्छ।
Shiatsu मालिश प्रविधि पछि फिर्ता एक महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर अंक उत्तेजित गर्दछ।
शरीरको ऊर्जा सन्तुलित छ र सुरक्षा बलियो बनाइन्छ।
एकै समयमा शीट्ससुले सुब्बोस (बिन्दुहरू) सक्रिय गर्दछ, जसका सम्बन्धित अंगहरूका लागि जिम्मेवार छन्।
दबाव जीवन को संतुलन मा परेशानियों को खत्म गर्न को इरादा छ, जस्तै तनाव या एक गलत जीवन शैली को कारण, र यसैले विभिन्न लक्षणहरु लाई कम गर्न को लागी।
उत्तेजना को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, शीट्सू को संपूर्ण जीव मा एक आकर्षक र सुखदायक प्रभाव छ।
लुम्बिनी स्पिनको क्षेत्रमा दुखाइको विरुद्ध एक्यूप्रेसचर मालिशले क्लासिकल फिजियोथेरेपी भन्दा राम्रो मद्दत गर्दछ।
- दर्दनाक मांसपेशिहरु तनाव र सख्त
- टाउको दुखाइ
- क्रस दुखाइ
- हटाउने सिन्ड्रोमहरू
- खुशी हार्मोन सीरोन को दर्पण को ऊंचाई
- अवसाद र अवसादका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ
- निद्रा विकार
- मासिक समस्या
- झुर्रिएको छाला र खरानीको साथ रक्त परिसंचरण बढाउँछ
+ एक्यूप्रेचर संक्रामक रोगहरु, ओस्टियोपोरोसिस, हालको चोटहरु, थ्रोम्बोजिस, वेरिकोजी रेजहरु, ट्यूमर र गर्भावस्था को लागि प्रयोग नहीं हुनु पर्छ।
पीडा दुखाइ पनि तिम्रो साथमा?
पीडा दुखाइको साथ पीडा सुरु हुन्छ!
वास्तवमा, कथा बचपनमा सुरु हुन्छ। स्कूलचाहिँ प्रायः धेरै टाढाको भित्ता लाग्छन्, फैशन पछि पछाडिको छैन, तर। नजिकै। यसले बारीमा पोष्टिक क्षति उत्पन्न गर्छ। चाहे कार्यस्थलमा वा अर्को कार्यमा पछाडि पनि भारी लोड हुन्छ। भारी वस्तुहरू गलत ढंगले उठाईएको छ, खेल समयका कारणका लागि सानो प्रयोग गरिन्छ
साना मार्गहरू कार द्वारा संचालित हुन्छन्। सामान्यतया, स्पाइनल स्तम्भको जलन, जुन अन्य शरीर प्रकार्यहरूमा विकिरण प्रभाव छ, यहाँ उत्पादन गरिएको छ।
यस्तो जलनले प्रेतको दुख पनि पैदा गर्न सक्छ।
युरोपमा, सांख्यिकीय रूपमा, सबै निवासीहरूको 27-40% अहिलेको पीडा दुखाइ छ।
% 70% मानिसहरूको बारेमा, यो दुखाइ कम्तिमा एक वर्षको 1 पटक हुन्छ:
प्रायः गहन अनुसन्धानमा पनि कुनै पनि कारण भेट्न सकिँदैन।
एक तिहाई भन्दा अधिक तहमा, पीठ दुखाइ मानसिक तनावसँग जोडिएको छ,
जस्तै काममा तनाव। नयाँ अनुसन्धान परिणामहरू देखाउँछन्। त्यो पनि तथाकथित प्रेत दुखाइको कारण हुन सक्छ। एक डाक्टरको भ्रमण सामान्यतया यहाँ मद्दत गर्दछ, तर प्राय: कारण सही तरिकाले नियन्त्रित छैन। सिरिगे केवल एक छोटो समयको लागि मद्दत गर्दछ र अन्ततः पुरानो ब्याक समस्याहरू छन्।
अन्तमा, प्रजातिको रीइनले आक्रमण गरिरहेको छ कि पहिला पहिला पहिला पहिला पहिला पहिला भित्री डिस्कमा जान सक्छ। प्रायः रोकथाम उपायद्वारा सिर्जना गर्न सकिन्छ।
परम्परागत चिनियाँ औषधि प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित छ। शरीरमा भनिन्छ मनिडियनहरू द्वारा गल्ती गरिन्छ। यी च्यानलहरु द्वारा जीवन ऊर्जा को प्रवाह गर्दछ। यी स्थगितहरू तथाकथित Tsubus द्वारा प्रतीक हुन्छ। प्रत्येक अङ्गले यो एक्यूपंक्चर बिन्दुहरूलाई निश्चित रूपमा नियुक्त गर्न सकिन्छ।
यदि यी मेरिडियनहरूको अभाव छ भने, सम्पूर्ण शरीरको वजनको विकार सामान्यतया हुन्छ। अक्सर परिणामहरू छन्: सिरिया / माइग्रेन्सहरू, निद्रा समस्याहरू, पाचन समस्याहरू वा पछाडिको दुखाइ। लक्षित मालिश समस्याहरूको माध्यमले शरीरको सन्तुलनलाई असर गर्छ र असुविधाको कारणले अक्सर लक्षित हुन सक्छ।
शाइट्सू मालिशले अंकहरू (सुब्बुस) सक्रिय गर्दछ। सम्बन्धित अंगहरूको लागि उत्तरदायी।
दस्तक एक्यूप्रेचर मा केहि मांसपेशिहरु लाई संबोधित गरिन्छ जसलाई फेरि केहि निश्चित मेरिडियंस संग र अंगहरु लाई प्रभावित गर्दछ। यी संवेदनशील बिन्दुहरू त्यसपछि विभिन्न प्रविधिहरू जस्तै दबाबको प्रयोग गरेर माछा मार्न सकिन्छ। यदि संवेदनशील Tsubos औंला समूह संग हिट भएको थियो भने, तपाइँ सामान्यतया प्रभावित व्यक्तिबाट छिटो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ। (दुखाइ)।
दुखाइको दबाबबाट, जुन आवश्यक रूपमा अप्रिय लाग्दैन, अन्तमा एक सुखद अनुभूतिको परिणाम हो जुन अन्ततः सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ। आधुनिक मसाज कुर्सियों आजकल यस मालिश प्रविधि को प्रायः कोठा मा घर मा नरसंहार भन्दा बेहतर प्रस्ताव गर्न सक्षम छन्।
शरीरको आकार पहिले स्क्यान गरिएको छ। एक विशेष रोलर प्रणाली को माध्यम ले जो क्षैतिज र ऊर्ध्वाधर चल्छ, मालिश तीव्रता शरीर लाई ल्याइन्छ।
थप थम्बनेल मोटर्सले सुन्दर मालिश प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
बैक र टाढा क्षेत्रमा तथाकथित एयरब्यागहरूको लक्षित समर्थन एकपटक एक्यूप्रेसचर मालिशको अनुकरण गर्दछ।
पछाडि क्षेत्रमा प्रयोग गरिएका रोलर्सले विभिन्न प्रकारका मसाज प्रकारहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम छन्।
माछा मा मालिश को लागि उपयोगी उपकरण - मालिश
मसाज गर्दा बस्दा धेरै लोकप्रिय हुन्छन्, विशेषगरि जब यो मोबाइल मामिलामा आउँछ। यो फारम मालिश मात्र 1980 वर्षमा स्थापित गरिएको थियो। यस समयमा, मसाजहरू प्रायः तल झरेको अभ्यास गरिरहेका थिए। तर यसले मौलिक रूपमा विकासको विकासमा परिवर्तन गरेको छ। धेरै जना रोगीहरूले आज बस्दा मालिशलाई प्राथमिकता दिन्छन्। र चिकित्सकहरूका निम्ति मालिशहरू धेरै उपयोगी विकास थिए। मालिशको विकासको कारण, मोबाइल मसाले 1980 वर्षमा साँच्चै लोकप्रिय भए। यसको अर्थ मालिशको सम्बन्धमा घर सेवा धेरै समयको राम्ररी भेटियो। तथापि, हरेक "कुर्सी मसाज" को रूप मा शुरु भएको थियो, जुन शुरुमा कार्यालय, हवाईअड्डा र प्रदर्शनी र सम्मेलनमा र घरबाट बाहिर निस्किएको थियो।
मालिश कुर्सियों को लागी धन्यवाद, एक मालिश जहाँ जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ। बैठकमा बसेको मुख्यतया कडा कंधे र गर्दन ब्रेसिजको साथमा प्रयोग गरिन्छ। एक मालिश कुर्सी पनि उपलब्ध छ
सानो समय संग आराम। किनकि मर्नीले अनावश्यक लम्बाईको लागि मालिश कुर्सीमा साईकल पोष्ट खोज्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि, मालिश कुर्सीले यो उपकरणमा कसरी भरोसा राख्नुपर्दछ वा यसलाई विशेष रूपमा विश्राम गर्न अनुभव गर्न सक्छ। माछा मा मालिश को लागि उपयोगी उपकरण - मालिश
मालिश कुर्सियां ​​आराम गर्न को लागी केवल धेरै व्यावहारिक नहीं हुन सक्छ। यदि तपाईंको पछाडिको समस्या छ भने, एक मसाज कुर्सीले तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छ। एकै समयमा एक कुर्सीको अधिग्रहणले फिजियोथापेस्टको लागि एक वा अर्को यात्रालाई बचत गर्नेछ। यो धेरै समय खपत गर्दै छन्, जुन एक जिम मा अभ्यास को लागि पनि सही छ। मसाले कुखुरालाई आफ्नो पीठमा पुर्याउँछ, अन्य चीजहरू बीच, कडा परिधान। एक रोलर मालिश वा Shiatsu प्रविधि समान समान छ र शुद्ध विश्राम को लागि खडा हुन्छ। कुर्सी कार्यालयमा वा घरमा प्रयोग गरिन्छ भने यो फरक छैन।
धेरै नयाँ तथाकथित 3D सेन्सर प्रविधि हो, जुन नेविगेशनको लागि प्रयोग गरिन्छ। पछाडि पहिलो स्क्यान गरिएको छ र त्यसपछि यो सम्भव छ कि मालिश व्यक्तिगत रूपमा ट्यून गरिएको छ। एक तनाव वा समेत दृढताले यति स्थायी रूपमा कम गर्न सकिन्छ। सर्वोत्तम मामला मा यस्तो शिकायतहरु लाई पनि सफा गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरू छन् जहाँ मालिश कुर्सीले काम गर्न सक्छ। यदि तपाईं अनिद्राबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि यस्तो प्रकारको कुर्सी परीक्षण गर्न सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। एकै समयमा, कुर्सीहरूले तनावको विभिन्न लक्षणहरूको विरोध गर्दछ। तनाव न केवल मांसपेशीहरूमा मात्र फिर्ता मा कंधे वा गर्दनमा मात्र जारी गर्न सकिन्छ। यदि तनाव समाधान हुन सक्छ भने, यो पनि रोक्छ। यद्यपि, वास्तवमा भारी खुट्टाका लक्षणहरू सजिलै संसारबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ। वनस्पति तंत्रिका तंत्र सकारात्मक प्रभावमा प्रभाव परेको छ र सामान्यतया एक मानसिक विश्राम हासिल गर्न सकिन्छ। धेरै कम्पनीले धेरै वर्षको लागि मालिश बूथहरू प्रदान गरेका छन् र यस क्षेत्रमा धेरै राम्रो अनुभव छ। यो कहिलेकाहीँ सिफारिस गरिएको छ कि फ्रान्सेली भण्डारमा यस्तो आर्मचेयर परीक्षण गरिनेछ। यसले खरिद पछि ठूलो निराशालाई रोक्न सक्छ।
मालिश कुर्सियों बस मालिश भन्दा धेरै प्रस्ताव गर्दछ
धेरै मानिसहरूले निश्चित रूपमा मालिश कुर्सीको बारेमा सोचेका छन्, तर सामान्यतया यस्तो कुर्सी किन्न खर्च खर्च गर्यो। यसबाहेक, प्रश्नले लाभहरूको बारेमा उठाउँछ। के एक मसाज कुर्सी साँच्चै तनावबाट छुट्याउन र रीइनलाई छुटकारा दिन सक्छ? हो, यस्तो मालिश कुर्सी यो र धेरै धेरै गर्न सक्दछ।
एक मालिश कुर्सीले विश्राम प्रदान गर्दछ
हाम्रो उच्च गुणस्तरको मसाज कुर्सियों दैनिक साबित हुन्छ कि रीढ़ रिलायंस र तनाव जारी गरिएको छ। यसरी तिनीहरू स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छन् र सामान्य भलाइमा योगदान गर्छन्। फिजियोथैपपिस्टको भ्रमण अक्सर आवश्यक छैन, विशेषगरि पछि त्यहाँ एक द्रुत उपचारको प्रतीक्षा समय र यस प्रकार एक लक्षण राहतको विरोध गर्दछ। हाम्रा कुर्सियां ​​मात्र शारीरिक, तर मानसिक पनि होइनन्।
हाम्रो मालिश कुर्सी व्यक्तिगत हो
हामी मालिश कुर्सीहरू लैजान्छौं, जुन व्यक्तिगत रूपमा प्रोग्रामयोग्य हुन्छ, जसको अर्थ उपयुक्त मालिश आकार र वजन अनुरूप छ। वास्तविक मालिश गर्नु भन्दा पहिले, शरीर स्क्यान गरिएको छ, त्यसैले विशेष बिन्दुहरू भेटिन्छ र उपकरण कहाँ आवश्यक हुन्छ। तर न केवल भौतिक भलाइलाई बलियो बनाइन्छ, हाम्रो मस्तिष्कको सीटहरू पनि आत्माको स्वच्छतालाई बेवास्ता गर्दैन। यस्तो उपचार पछि, अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूले शरीरमा सुखदायक विश्राम अनुभव गर्छन् र यसले मूडलाई पनि प्रभाव पार्छ।
मालिश कुर्सीसँग तपाईंको पछाडि खराब गर्नुहोस्
मालिश स्टूडियो / जिम मा समय-उपभोग अभ्यास बिना, फिर्ता राहत र विभिन्न मालिश प्रविधि संग लास गर्न सकिन्छ। चाहे घुटनी मालिश, रोलर मसाज वा शियट्सु मालिश हो, हाम्रो मालिश कुर्सियोंले नयाँ ऊर्जाको साथ, घर वा कार्यालयमा भर पर्नेछ। हाम्रो उच्च गुणवत्ता गुणस्तर सीटहरूको बारेमा बिना कुनै दायित्वको बारेमा जानकारी दिनुहोस्, तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ।
अन्तमा कल्याण उत्पादहरू जस्तै मालिश कुर्सियों संग विश्राम
सबैजना यो जान्दछन्। उनको पछि एक लामो दिनको काम, काममा धेरै तनाव, धम्की।
यो अक्सर फिर्ता समस्या, मांसपेशिहरु र गर्दन मा तनाव, र धेरै अन्य विचलित चीजहरूको नेतृत्व गर्दछ।
यसैले, कल्याण उद्योग कल्याण, मालिश, सौना, तर मालिश कुर्सियों, मालिश कुर्सियों, मसाज तालिकाहरु जस्तै उत्पादनहरु पनि मा धेरै उत्पादनहरू (भलाई कल्याण समेत सहित) बढ्दै गएको छ। विश्राम को लागि सबै केहि राम्रो छ।
यस पृष्ठमा हामी मालिश कुर्सियों र मालिश कुर्सियों संग कल्याण संग धेरै सहयोग गर्न चाहन्छौं, तर मालिश टेबलमा पनि मालिश। त्यस्तै विषयको बारेमा जानकारी दिन, शरीर राम्रोसँग सबै कुरा भन्नुहोस्
मालिश गधाले पीडा दुखाइबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ
धेरै तनाव, गलत आंदोलनहरू, ब्याक समस्याहरू। पछाडि दुखाइ अक्सर प्रायः निदान हुन्छ जुन अन्ततः आफ्ना नियोक्ताहरूसँग कर्मचारीहरूलाई शंका गर्दछ। किनभने एक कर्मचारीले पीडा दुखाइको सामना गर्दछन्, त्यसपछि त्यहाँ एउटा खतरा हो कि उसले नियन्त्रणमा राखेको यो समस्या भन्दा बढी बिरामी रिपोर्ट ल्याउँछ। यस मामला मा नियंत्रण को तहत मतलब छ कि एक सचेतक क्रियाकलाप जो धेरै कर्मचारीहरु, दिन पछि, सप्ताह को हफ्ते पछि, र वर्ष पछि, पीठ दर्द को लागि केहि पहिले देखि नै केहि खरीद किनछ, उदाहरण को लागि, एक लक्जरी मालिश कुर्सी। विलासिता मालिश कुर्सियों को विभिन्न प्रकार को मालिश गर्न सक्छन्।
विद्युत मात्र मालिश भेरियहरुको नियन्त्रण होइन, तर समायोज्य backrest र टाउको समर्थन पनि। वा सिर्फ एक मालिश र एक मालिश मा पुरा तरिकाले शास्त्रीय बाटो।
उपयोगी एक मालिश कुर्सी / मालिश र सानो प्रयोगकर्ता दुवै को लागि कुर्सी हो। आखिर, धेरै जवानहरू पहिले देखि नै फिर्ता समस्याहरुबाट पीडित छन्। निस्सन्देह तपाईं काम गर्न संग मालिश कुर्सियां ​​लिन सक्नुहुन्न, यद्यपि यो पनि घुमाउरो छ। कार्यस्थलमा सिधामा, बसोबास स्थितिको एक मात्र परिवर्तनले प्रायः आकस्मिक गतिविधिमा मद्दत पुर्याउँछ र पीडाको दुखाइ रोक्न सक्छ। सबै भन्दा माथि, सही सिट उचाइ यहाँ विचार गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, एरोबिक्स, साइकल चलाउनका साथै खेलकुद र स्विमिंग खेल पहिलो स्थानमा ब्याक दुखाइ रोक्न उपयुक्त छ। मालिश कुर्सी चलाउनको लागी एक पावर केबल आवश्यक पर्दैन। तपाईलाई आवश्यक छ 220 V / 50 हर्ट / 180 डब्ल्यू को लागि बिजुली आपूर्ति
मालिशले मालिशको कुनै पनि स्थितिलाई अनुमति दिन्छ
विभिन्न मसालेका प्रकारहरूलाई पनि समर्थन आवश्यक पर्दछ जसमा रोगीले आराम गर्दछ। मालिश यस उद्देश्यको लागि उपयुक्त छ। यी मोबाइल मोबाइलको लागी उपयुक्त छ र यस कारण सजिलै वजन मा, धेरै कम्पैक्ट र पनि सहज छ। सबै पछि, मसाले कुर्सियों पनि घर व्यापार मा मानेर्स द्वारा प्रयोग को लागि उपयुक्त छ। र यी मसाज कुर्सियां ​​पनि एक तथाकथित Sternumkissen र एक Tragetasche पनि छ। अवश्य
सीट उचाई, आर्मेस्ट, सीने र हेडस्टोन व्यक्तिगत समायोज्य।
मालिशले मासिसम्म रोगलाई घुटने स्थितिमा ल्याउन अनुमति दिन्छ। यो मतलब छैन कि हरेक मालिश पछाडि प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि मालिश छन्, तपाइँ मालिश मालिश कुर्सी जस्ता कुनै पनि मद्दत उपाय आवश्यक छैन। यो विशेष रूप देखि कामसूत्र को सही छ, यद्यपि मालिश माट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मालिश कुर्सियां ​​मुख्य रूप देखि आराम मालिश को लागि प्रयोग गरिन्छ। मालिश कुर्सियों ergonomic डेस्क कुर्सियों जस्तै कि बच्चाहरु को लागि उपयुक्त हो जस्तो देखिन्छ। यो एक backrest छ, तर यस क्षेत्र मालिश कुर्सियों संग चेहरा डिजाइन गरिएको छ कि अनुहार त्यहाँ सुखद ठाउँ पाउँछ। यस प्रकार मालिश कुर्सीले सुरक्षित होल्डको साथ थोरै मरीज प्रदान गर्छ र मालिशले ठीकसँग मालिश प्रदर्शन गर्ने अवसर दिन्छ।
अभ्यास प्रयोगमा व्यावसायिक मालिश
तपाईं आत्म-कार्यरत एक प्रशिक्षित masseur र मुख्य रूप सकेसम्म सजिलै पाठ्यक्रम ओसारपसार सकिँदैन केही आवश्यक बर्तन आवश्यक छ कि आफ्नै घरमा उपचार गर्न चाहनुहुन्छ गर्ने ग्राहकहरु ध्यान बन्न भनेर निर्णय गरेका छौं घटनाको , को masseur एक ग्राहक जान्छ भने लागि, त्यसपछि यो पक्कै उहाँले आफ्नो घर बाहिर सार्न वा रोगी सार्न थियो हुनत रूपमा हेर्न छ। यो बाटो मा विज्ञापन एक व्यावहारिक प्रयोग वा आवश्यकता, लागि प्रयोग गर्ने (सक्नुहुन्छ आफ्नै वाहन मा बर्तन यहाँ आदर्श, एउटा कुरा अझै पनि तपाईं बस भ्रमण जो रोगी, को वरपर मा विज्ञापन छ गर्नुपर्छ सम्भव छ र गर्न सक्छन् नयाँ ग्राहकहरू)। तथापि, तपाईलाई पेशेवर मालिश बिना गर्नु पर्दैन। किनकि यी पनि फोल्डयोग्य छन् र त्यसैले ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छ, साथ साथै एक मालिश लौगर। तर मालिश कुर्सियों भन्दा यदि मसाज चिकित्सक मालिश केही प्रकारका मा मालिश आनन्द आफ्नै भोजन कक्ष कुर्सी भन्दा दुबला यो सोध्नु पर्छ रोगी लागि धेरै सुविधाजनक को पाठ्यक्रम छन्। मोबाइल मसाज बेडहरू पनि पिडामा छन्, निस्सन्देह, मर्मतको लागि उत्तम सम्भावित सहयोग र सान्त्वना प्रदान गर्दछ। पोर्टेबिलिटी, निस्सन्देही, डिजाइन गरीनु पर्छ कि अधिक वजन संग मान्छे पनि उपचार गर्न सकिन्छ।
मालिश बेड - हट-पत्थरको मसाजको लागि आधारभूत उपकरण
मालिश कहीं पनि गर्न सकिन्छ। धेरै मालावरहरूले आफ्ना सेवाहरू पनि मोबाइल प्रदान गर्छन्। यसको अर्थ तिनीहरू घर आउँछन्। साथै गर्म-स्टोन मसाज आंशिक रूपमा ग्राहकहरूसँग घरमा लागू हुन्छ। तथापि, मालिशले हट-ढुङ्गा मालिशमा धेरै उपकरणहरू लिनु पर्छ। बेसल्ट लावा पत्थरों को बावजूद, मा मालिश लौगर पनि शामिल छ। यो मोबाइल र समापन छ। मालिश, साथ ही मेसाजेलेज को केवल केहि सौ यूरो को मूलभूत उपकरण को रूप मा लागत।
मसाले मालिश साँच्चै एक सुन्दर डिजाइनको पनि हुनुपर्छ, यसरी यसरी
प्रविधि र सुन्दरताको संयोजन। निस्सन्देह, एक मालिश तालिकाले राम्रो सुरुवात गर्दछ जब यो एक सुरुचिपूर्ण एल्युमिनियम फ्रेम बाट बनाइन्छ। यस्तो सोफेमा छिट्टै निर्माण गरिएको छ, सामान्यतया केहि सेकेण्ड भित्र। निस्सन्देह, यो मालिश तालिका पनि हेरचाहबाट मुक्त हुनुपर्छ। किनकी प्रत्येक प्रयोग पछि, यो एक राम्रो राम्रो मामिलामा पठाउँछ, यदि उसले तिनीहरूलाई सफा गर्दछ। मालिश टेबल को निश्चित रूप देखि एक आरामदायक कुशन पैड हुनु पर्छ। किनकि मालिश को प्रयोगकर्ताले उनको सुविधाबाट लाभ उठाउन सक्दछ। यसको अतिरिक्त, मालिश पैड पनि एक धेरै उच्च भार क्षमता हुनुपर्छ। मसाज तालिकाहरू अधिकतम 300 किलोको सामना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, किनकि सबैले, एक मामिलामा प्रत्येक ग्राहकको सेवा गर्न चाहन्छ, भले यो यो लेपनमा थोडा अधिक वजन थप्छ।
पीडा दुखाइको लागि मालिश
पछाडि औद्योगिक औद्योगिक देशहरूमा राष्ट्रिय रोगहरू मध्ये एक छ, र त्यसैले जर्मनीमा पनि। आज तथ्याङ्कहरूले बताउँछन् कि चार जर्मनहरू मध्ये तीन बाहिर पीडाको पीडालाई कम से कम एक पटक उनीहरूको जीवनमा एक पटक। तर पीडाको दुखाइले पनि पुरानो हुन सक्छ,5को 10 प्रतिशतको साझेदारीसँग ब्याक दुखाइ सँग असक्षमताको सबै भन्दा सामान्य कारण हुन सक्छ। तर पनि काम गर्ने काम गर्ने धेरै मानिसहरू पुरानो पीडा दुखाइबाट पीडित छन्। यसको कारण यो हो कि व्यक्तिगत स्पाइनल स्तम्भ सेक्शन विभिन्न व्यवसायहरुमा तनाव को विभिन्न डिग्री को अधीन हो। यस कारणका लागि, तिनीहरू अक्सर सम्बन्धित उजुरीहरू प्रभावित हुन्छन्। लम्बेर स्टेटेबारामा दुखाइ 62 प्रतिशतमा छ। यी सामान्य क्रस दर्द हो। तर पनि छाती र गर्दन सुत्ने दुखाइ अक्सर प्रभावित हुन्छ। तर दुखाइ पनि अधिक गम्भीर हुन सक्छ। यसैले, लारीनल र स्कटिका र डिस्क समस्या पनि हुन सक्छ।
यस दुर्व्यवहार विरुद्धको उपायहरू औषधीहरू छन्। यद्यपि, यदि तपाईं लामो समयमा यो गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई निश्चित रूपमा विचार गर्नुपर्छ कि एक मालिश पनि एक विकल्प हो। पीडाको दुखाइमा एक मालिशले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तनाव मांसपेशिहरु आराम गर्दै छन्। स्पिन धीरे फैलिएको छ। तथापि, न केवल शारीरिक अवरोधहरू तर मानसिक र ऊर्जावान ब्लकहरू पनि यस्तो मालिश द्वारा हल गर्न सकिन्छ।
यो रोकथाम राम्रो तरिकाले एक रोकथाम को रूप मा यस मालिश को लागी, यो कि यिनी सबै तनावहरु लाई बिल्कुल नहीं आउन सक्छ। साम्राज्यमा हिंड्नुको साथै तपाईं एक मालिश कुर्सी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर उद्योगले व्हार्लपूलहरू पनि एक मालिश विकल्पसँग प्रस्तुत गर्दछ, वा तपाईं पेशेवर सौना केन्द्रहरूमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईं मांसपेशियों को गर्मी को माध्यम ले आराम गर्न सक्छन् र एक नै समय मा ज्यादातर पेशेवरहरु लाई मालिश मा मालिश गर्दै छन्। साथै घरमा त्यहाँ सम्भावनाहरू छन् र उदाहरणका लागि मसाज-मज्जाले प्यानलहरू सजिलै सजिलै सुत्न सकिन्छ। यद्यपि उत्पादनहरु जस्तै मालिश कुर्सियां, व्हर्लपोल प्रणाली, सौना, आदि सबै खर्च पैसा, निस्सन्देह, उनि लामो अवधि मा तिर्न सक्छन् र तपाईं भन्दा पहिले भन्दा कम पीठ दुखाइ संग समाप्त हुन सक्छ।
रोजगारीको जीवनबाट बचाउनुहोस्। टाउको दुखाइको उपचार गर्नुहोस्। यो एक सुख्खा टाउको मालिश संग राम्रो तरिकाले गर्न सकिन्छ। टाउको दुखाइको साथले एकजनाले सम्पूर्ण वातावरणलाई बुझ्दछ, अनुहार बोल्छ, गर्दन, गर्दन, तर पनि खोप। तर न केवल विरोधको कारणले टाउको मालिशमा मद्दत गर्दछ। हजुरआमाहरू सिफारिस गर्छन्, उदाहरणका लागि, बाल्यकालको हानिकारक विरूद्ध नियमित सिराइ। यद्यपि यो चमत्कारिक उपचार होइन, तर निश्चित रूपले कपाल हटाउन सक्छ। दुर्भाग्यवश, धेरै लाखौं दुर्भाग्यवश यस्ता बालबालिकाको पीडाबाट ग्रस्त हुन्छन्, तर प्रायः वंशानुगत हुन्छ। यसबाहेक, यसको विरुद्धमा पहिले नै केही आशावादी उपचारहरू छन्। त्यसोभए सक्रिय घटक फिनस्टराइडसँग मौखिक प्रयोगको लागि एक विशेष गोली हुन्छ, तर माइनोक्सिड जस्ता टाउको मा माछाको माध्यम पनि। लक्ष्य बाल कपाल राम्रो फेरि खून र राम्रो सिर मालिश संग पूरक खून गर्न को लागि, यो धेरै राम्रो पूरक छ। जसले पनि थप सफलता हासिल गर्न सक्दैन, केवल बाल प्रत्यारोपण / बाल प्रत्यारोपण संग मात्र मद्दत गर्न सक्छ। सफलता यहाँ छ, तथापि, र अन्ततः तिनीहरू 12 महिनाको बारेमा क्यान्सर प्रत्यारोपण गर्नुपर्नेछ जब सम्म उनि अन्त्य बढ्छ। विशेष कम्पनीहरू जस्तै, अग्रिम राम्रोसँग सूचित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। हेयरवरहेव - एन्ड्रियास क्रमर, उदाहरणका लागि, बाल प्रत्यारोपणमा विस्तृत सल्लाह प्रदान गर्दछ। बस राम्रो जानकारी को फोरम मा या सामान्य मा वेब मा मिलन सक्छ। हस्तक्षेप अघि धेरै राय पाउन महत्त्वपूर्ण छ।
थाई मालिश - पुरातन उपचारको सम्पर्क
थाई मामिलामा व्यापक रूपमा प्रयोगमा प्रयोग गरिन्छ। यो एक प्राचीन मालिश प्रविधि हो, मूलतः थाईल्याण्ड बाट। यो मसाज को रूप मा धेरै भन्दा नाउद फेन बोरान पनि भनिन्छ। र यो धेरै "पुरातन चाइना टच" अनुवाद गर्दछ। तथापि, पश्चिमी युरोपेली क्षेत्रमा, यो मालिशको "थाई-योग-मसाज" भनिन्छ, किनभने मालिशको यो प्रकार निष्क्रिय भाग समावेश गर्दछ, पदहरू खिच्दै र योग, संयुक्त गतिशीलता र अन्ततः दबाव बिन्दु मासबाट लिइएको आंदोलनहरू फैलाउँदछ। मसाज रोगी मा लागू हुन्छ हात, अंगूठे, तर घुटनों र कोहनी र खुट्टा संग मालिश को एक संयोजन। ऊर्जा लाइनहरूले यस प्रकारको मालिशमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो जहाँ छ भनिन्छ भनिन्छ मामामैपन्टे (ऊर्जा बिन्दुहरू) झूटो छ। आयुर्वेदिक सिद्धान्तको अनुसार, मानिसको जीवन जीवन ऊर्जा (प्राण) संग आपूर्ति गरिन्छ। प्राण सास फेर्नको लागी शरीरलाई डेलिभर गर्न सकिन्छ। थाइ मसाले नली, सिरदर्द, कब्ज, दस्त र ईश्वर पनि सजिलै सजिलै निद्रा समस्या, पीठको दुखाइ, घुट्ने दुखाइ र शोक र पनि खरानी पनि कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पारंपरिक रूप मा कार्रवाई को मोडहरु हो। यसको अलावा, वहाँ एक स्कूल दबाइ परिप्रेक्ष्य देखि पनि प्रभाव छन्। सबै भन्दा माथि, स्कूली औषधिले रोमाञ्चक हुन्छ कि यी दबाबको बिन्दुले रक्त परिसंचरण को उत्तेजित गर्दछ। फलस्वरूप परिणामले मांसपेशी संस्कृतिलाई पनि आराम गर्न सक्छ।
घरको लागि कल्याण
अक्सर यो यति धेरै छ कि एक सुन्दर विस्तारित कल्याण अवकाश पछि क्लासिक दैनिक जीवनको इच्छा छैन। कल्याण लाउन्ज को आराम वाला स्वाद को लागि एक लामो। तथापि, कसैले सम्झनाहरूमा रमाउन आवश्यक छैन। किनकि यो वातावरणको घर प्राप्त गर्न गाह्रो छैन। केहि ह्यान्डल्स र चाल संग तपाईं आफ्नो चार पर्खालहरुमा अद्भुत निजी मनोरंजक केन्द्र बना सकते हो। निस्सन्देह यो बाथरूम मा सौना स्थापना गर्न सम्भव छैन। तथापि, स्थापना इन्जिनियरिङका लागि केही सम्भावनाहरू छन्।
सबैभन्दा पहिले, तपाईं एक उपयुक्त स्थान छान्नु पर्छ। तपाईँका आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ, एक कोठा कुना पर्याप्त छ। जसमा तपाई आफैले सहज बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक राम्रो पुस्तक संग आफैलाई सहज बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाइँ एक लटका कुर्सी किन्न सक्नुहुनेछ। केहि cuddly तकिया र एक सुखद प्रकाश थप गर्नुहोस् र तपाईंले शान्त पढ्ने ओसिस सिर्जना गर्नुभएको छ। अझ बढी आकर्षक एक कुर्सी कुर्सी हुन सक्छ। आधुनिक खरीदारी केन्द्रहरूमा, यी पनि सशक्त विक्रेताका लागि उपलब्ध छन्। यदि कसैले एक मालिश कुर्सी राख्छ भने कसैले बैगमा गहिराई लिनु पर्छ। यदि तपाईं मालिश कुर्सियों, कुर्सियों वा कुशन को गुणवत्ता मा ध्यान नदिनु हुन्छ भने, तपाईं आराम मिलन सक्दैन। सुखद परिवेश घरली सामानहरू द्वारा प्रदान गरिएको छ, जुन धेरै सस्तो प्राप्त गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि अभिनव कम्पनी केयर बाट। खुसी मानिसहरू जो 08 / 15 सुविधाहरू मनपर्दैन त्यहाँ त्यहाँ खुसी हुनेछन्।
निस्सन्देह, आफ्नो घर मा एक स्पा शाम को समयमा, कुनै वास्तविक थर्मल नहाने महसूस महसूस गर्न सकिन्छ। तर सानो स्नान नमक संग, त्यो एकदम सिमुलेटेड हुन सक्छ। खनिज-अमीर पानी विशेष गरी पुरानो बीमारहरू रहिरहन्छ र एलर्जी र गठिया संग मद्दत गर्दछ। तपाईंको घरमा पूर्ण कल्याण अनुभव, निस्सन्देह, यो भीषण समावेश गर्दछ जुन आन्तरिक र बाह्य रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जो कोही आउँदै आइतबारको लागि तयार हुन चाहानुहुन्छ क्लासिक ठंडा-गरम इलाजमा सहज हुन्छ। यदि तिनीहरू केहि असहज भए पनि तिनीहरू अत्यन्त प्रभावकारी छन्।
यदि यो तपाईंको लागि सबै जटिल छ भने, निस्सन्देह तपाईं केहि गर्न गरेर पनि रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। एक्लै सबै चीज छोडेर धेरै मानिसहरूको लागि धेरै सजिलो छैन। तर यो वास्तवमा तपाईलाई तालिम दिनुपर्छ। यसको अलावा एकले आफैंलाई स्पष्ट बनाउँछ कि आज त्यहाँ बेपत्तापनको दिन हो। तपाईले मात्र मनपराउने चीजहरू मात्र गर्नुहुन्छ। सबै अप्रिय काम बस बायाँ रहन्छ। यो समयको कारणले यो बुझ्न सक्दैन, जुन एकदम फरक कल्याण विधि हो। उदाहरणका लागि कारमा कल्याण कसरी हुन्छ?
Massagesessel - फायदे
मालिश र मालिश कुर्सियों उनको स्वास्थ्य को एक सकारात्मक प्रभाव छ उनको सुखदायक मालिश समारोह को कारण। मालिशले विश्रामलाई उत्तेजित गर्दछ। फिर्ता, घाँटी र काँध मांसपेशीमा तनावमुक्त र तनाव-सम्बन्धित टाउको दुखाइ र फिर्ता दुखाइ alleviated गर्न सकिन्छ। तनाव लक्षण जस्तै उच्च रक्तचाप मालिश कुर्सीले सुधार गर्न सकिन्छ। consciously को मालिश कुर्सी क्षमता मा आराम जान र सुतेको वा निद्रा समस्या सुधार हुन सक्छ दिनु प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ। भारी खुट्टा, थकान र circulatory समस्या नियमित मालिश कुर्सी वा कुर्सी द्वारा हल गर्न सकिन्छ। साथै, सचेत विश्राम गर्ने autonomic स्नायु प्रणाली र psyche सकारात्मक प्रभाव छ। आधुनिक मसाज कुर्सियां ​​पनि तपाईंलाई अप्ठ्यारो लागी प्रदान गर्दछ र निर्बाध रुपमा तपाईंको लिङ्ग कोठा मा फिट गर्दछ।
कार्यस्थलमा आराम गर्नुहोस्
यदि तपाईं न केवल घरमा आराम गर्न चाहानुहुन्छ, तर कार्यालयको दबाब र रोजगारीको जीवन र नम्र जीवनको विरुद्धमा पनि, मालिश कामको साथ कार्यालय कार्यालय कुर्सी सही विकल्प हो। आराम र आराम को केहि मिनेट को लागि आफैलाई वा एक दिन को धेरै पल्ट व्यवहार गर्नुहोस, तब तपाईं रोजमर्रा की समस्याहरु लाई ताजा गर्न को बल को मजबूत गर्न सक्छन्।
अघिल्लो लेखफिटनेस पेट मांसपेशी बेल्ट
अर्को लेखकुकुर Crate